Taliyaha cusub ee Ciidamada Booliska Soomaaliyed Jen. Saacid oo maanta si rasmi xilkiisa ula wareegay. – idalenews.com
Taliyaha cusub ee Ciidamada Booliska Soomaaliyed Jen. Saacid oo maanta si rasmi xilkiisa ula wareegay.
Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax, Gudoomiya Maxkamada Sare Caydiid Ilka Xanaf iyo Wasiirka Arrimaha Guddaha iyo Amniga Qaranka Cabdikariin Xuseen Guuleed, ayaa ka qeyb-galay munaasabada xilwareejinta taliyaaha cusub ee Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed General Cabdixakiim Dahir Saciid ,Gen. Saacid oo xilka kala wareegay General Sharif Shiikhuna Maye.
“Hogaanka cusub ee aan u magacawnay ciidamada difaaca iyo amniga dalku wuxuu qeyb weyn ka yahay dadaalka aan ugu jirno sugida amniga iyo isbadalka cusub ee aan ku doonaynno inan si buuxda ugu xasilino dalka,” ayuu yiri Ra’iisal Wasaaraha oo hadal kooban ka jeediyay munaasabadii xil wareejinta ee ka dhacday dugsiga tabo-barka ciidanka ee General Kaahiye loona yaqaano -Scuola Polizia.
Daawo Sawirada Ciidamada Jabuuti oo howl galo ay hub ku soo qab qabteen ka sameeyay B/weyn
Nawas Shariif ayaa sheegtey in uu ku guuleystey Doorashadii Pakistan